Tag: trends » Martech Zone
Nguva Yokuverenga: 4 maminitsi Enhanced vatengi ruzivo rwave rwusingataurirane kumabhizinesi anoda kukwezva nekuchengetedza vatengi. Sezvo nyika ichiri kuenderera mberi ichipinda munzvimbo yedhijitari, nzira nyowani dzekutaurirana uye epamberi data mapuratifomu zvakagadzira mikana kumasangano ekuvandudza ruzivo rwevatengi uye kugadzirisa nzira nyowani dzekuita bhizinesi. 2020 rave gore rizere nemhirizhonga, asi zvave zvakare zvinokurudzira mabhizinesi mazhinji kuti apedzisire atanga kugamuchira dhijitari - ingave
Nguva Yokuverenga: 7 maminitsi Hazvina chakavanzika Marketing dzinokura vape- nokuchinja uye zvakagadzirwa mune zvemichina. Kana iwe uchida kuti bhizinesi rako rimire, uunze vatengi vatsva uye wedzera kuoneka pamhepo, iwe uchafanirwa kushingairira nezvekuchinja kwetekinoroji. Funga nezvetekinoroji maitiro munzira mbiri (uye yako mindset ichaita musiyano pakati pekubudirira mushandirapamwe nemakiriketi mune ako analytics): Chero tora matanho ekufunda maitiro uye woashandisa iwo, kana kusara kumashure. Muizvi
Nguva Yokuverenga: 4 maminitsi Kwese kwaunotarisa, zviri pachena kuti nharembozha yave kubatanidzwa munzanga. Sekureva kweAllied Market Research, saizi yepasirese yemusika wepasi rose yakasvika $ 106.27 bhiriyoni muna 2018 uye inofungidzirwa kuti inosvika $ 407.31 bhiriyoni na2026. Iko kukosha kunounzwa neapp kumabhizimusi hakugone kudzikiswa. Sezvo musika wekufambisa unoramba uchikura, kukosha kwemakambani anoita vatengi vavo nharembozha kunowedzera zvakanyanya. Nekuda kwekuchinja kwe
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Yekutsvagisa injini yekugadzirisa ndiyo nzira yekukanganisa kuoneka kwewebhu webhusaiti kana peji rewebhu mune yewebhu yekutsvaga injini isina kubhadharwa mhedzisiro, inonzi yakasikwa, organic, kana mibairo yawanikwa. Ngatitarisei panguva yekutsvaga injini. 1994 - Yekutanga yekutsvaga injini Altavista yakavambwa. Ask.com yakatanga kuseta zvinongedzo nekuzivikanwa. 1995 - Msn.com, Yandex.ru, uye Google.com zvakatangwa. 2000 - Baidu, yekuChina injini yekutsvaga yakatangwa.
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Kana iwe ukabvunza gumi nevaviri vevanoshambadzira agency varidzi zvavanoita, vangave kana kwete ivo vari kukura, uye nemabatiro avanowana kubva kumasevhisi avanopa… Ndine chokwadi chokwadi iwe unowana gumi nemaviri mhinduro dzakasiyana kubva kune yega yega. Ndine kusahadzika kushoma isu tese tinoda izvo zvatinoitira vatengi vedu, asi isu tese tinowana nzira yatakanaka ndokutungamira iko kunongedzera. Iyo 2018 RSW / US Marketer-Agency Nyowani Year Outlook Infographic yakavakirwa pane yedu yazvino ongororo,